Inona no mahaliana momba Soulsex ary ahoana no ampiharana azy?
Inona ny Soulsex?
Ahoana no iasan'ny Soulsex?
Tsy dia nisy nandritra ny fotoana lava be ny firaisana, ary raha manao izany izy, dia mendri-piderana, mahazatra ary mahafa-po. Ny fanorohana fandraisana an-tsitrapo aorian'ny asa dia tsy midika velively ho an'ny mpiara-miasa, saiky tsy mahazo aina.
Amin'ny lafiny mampihomehy, na izany aza dia samy mitovy ny mpiara-miasa: maniry mafy izy ireo amin'ny fangorahana, ara-pihetseham-po ary ara-pihetseham-po, mazava ho azy, ho an'ny firaisana. Tsy ny mpiara-miasa ihany no toa nifindra toerana.
Soulsex dia mety ho fomba iray hamerenana ny hafaliana ho an'ny olona iray izay mbola misy ny fitiavana.
Toy ny akaikin'ny mpiara-miasa amin'ny Soulsex
Fahafinaretana sy fahafinaretana tsy misy dikany
Amin'ny fiantombohan'ny fifandraisana na ny raharaha iray dia toa eo foana ny fihenjanana. Manolotra ny tenantsika amin'ny mpiara-miasa isika ary tsy misy zavatra azony atao mba hisakanana antsika tsy hahita azy.
Ohatra, ireo marary malemy izay tsy afaka mampiasa ny atiny intsony - ary mety manana fotoana kely kokoa hijerena ny fiainany ara-nofo amin'ny fomba fijerin'ny fisainana - dia manana fihetsika mitovy. Ireo mpitsabo any amin'ny trano fitaizana be antitra dia mitatitra fa maro amin'ireo mponina ireo no mavitrika amin'ny resaka firaisana ara-nofo, na dia eo aza ny heviny.
Ny faniriana hanao firaisana dia ao, na dia ao anatin'ny fiaraha-miasa miara-dia aza. Saingy raha miditra amin'ny fahazarana ny fahazarana dia miova amin'ny saina ny toe-tsaina - ary tsy manao afa-tsy izay te-hanakiana azy. Ny oroka mahazatra dia mety tsy mahatsapa ho tsara, fa ny fisaintsainana no mahatonga ny faniriana hafa hanimba.
Tsaroan'ny tsirairay ny traikefa ara-nofo, izay tsy momba ny ara-batana, fa ny fifandraisana ara-pihetseham-po amin'ny mpiara-miasa. Indrindra indrindra amin'ny fifandraisana vaovao izay misy ny fitiavana ary raha mbola tsy misy fahazarana, dia mitombo io lafiny amin'ny firaisana ara-nofo io. Izay ilay mpanoratra Eva-Maria Zurhorst dia te-hamelona indray ao amin'ny bokiny hoe "Soul Sex - Ny Fitiavana Maimaim-poana Mandrakizay".
Satria inona no mahatonga antsika ho tsara amin'ny karazana firaisana toy izao? Izany no fomba tsara isian'ny teboka rehetra, ary koa hoe ahoana no ahafahantsika manonona izay tsy itiavantsika. Ny mpiara-baovao dia mifankahafantatra ary tsy maintsy mizara izay tiany sy izay tsy ataony. Ny ezaka ataon'ireo mpiara-miasa tsirairay dia ny mamantatra ny iray amin'ireto lafiny ireto, ny mijery ny zavatra tiany sy ny karazana fiakarana hahatonga azy ho tsara sy ny fotoana.
Ao anatin'ny fifandraisana maharitra, tsy maintsy hitantsika foana izay toerana tiany hahatongavana amin'ny namana, ny fitiavana ary ny fitsangatsanganana tsy tapaka. Tsy misy ny fahazarana iray, ary koa mahafantatra ny tenany - mahatonga an'i Soulsex ho mahafinaritra, ny fahitana vaovao hatrany ny faniriana sy ny filan'ny mpiara-miasa amin'izao fotoana izao ary ny akaiky azy, izay tonga amin'ny fanolorana azy ireo.
Tanora roa - fahalemena
Manomboka amin'ny olona rehetra ny soulsex. Mahatsiaro ho mahafinaritra tokoa ve ny fiarahabana mahazatra?
Raha izany no izy dia ho voatazona izy ireo. Saingy raha toa ka mihazakazaka ny fihenjanana sy ny halaviran-dalana, dia tsara ny milaza izany amin'ny mpiara-miasa. Tsy tokony homena tsiny izy, fa ny zava-misy dia tokony ho hafa ny fanorohana. Mafy. Marina.
Angamba handao azy irery ianao, raha tsy misy olana. Izany fahatsapana izany dia mbola mila amboaran'ny mpivady sy ny olona maro fa afaka miara-miasa aminy. Zava-dehibe ihany koa ny milaza amin'ny mpiara-miasa ary mampiseho izay tadiavinao - ary zava-dehibe ny fandraisana anjara.
Tsy midika akory izany hoe akanjo lava na tsangam-pako tsy mampifaly, avelao ny "zava-baovao" hanatsarana ny fiainana ara-nofo. Ny mikasika ny faniriana hanao firaisana ihany. Mpandray anjara iray no mifandray aminao. Ilay mpiara-miasa hafa dia manohy ny dia ny fahitana ny fahatanterahany - ary ny mifamadika amin'izany.
Bila sary sokitra nandravahana Erotic tao amin'ny koveta